Ruzivo rwakakosha rweLeuprorelin Acetate Side Mhedzisiro, Dosage
1. Chii chinonzi leuprorelin acetate?
3. Leuprolide acetate inoshanda sei?
4. Nzira yekushandisa leuprorelin acetate?
5. Leuprorelin acetate Dosage uye leuprorelin acetate Administration
6. Leuprorelin acetate side athari
Leuprorelin acetate imhando yemapeptide ayo anoshandiswa pamwe chete nemamwe madhiragi kurapa chirwere chekenza yeprostate mune varume. Nekudaro, hazvirape chirwere ichi asi kuti chidzivise kuti chisapararire uye ibatsire kudzvanyirira kenza yeprostate mumuviri wako. Leuprorelin inotengeswa muUnited States of America pasi pezita reLupron, uye inogona kuwanikwa munyika dzakasiyana pasi pezita rakasiyana.
Ruzhinji rwemhando yekenza yeprostate inoenderana nema testosterone mahormone kukura uye kupararira mumuviri wako. Nekudaro, Leuprorelin acetate poda inoshanda nekudzvinyirira kugadzirwa kwemahomoni e testosterone zvichiita kuti zvive nyore kudzora kukura kwemasero ekenza yeprostate pamwe nekubvisa marwadzo kana matambudziko anowanikwa nevarwere vachiita weti.
Kune rimwe divi, Lupron inoshandiswa nevakadzi kurapa endometriosis zviratidzo, zvinowanzozivikanwa sekuti uterine fibroids. Leuprolide acetate uye nhumbu chinhu chakanyanya kunetsekana nevakadzi, usatore mushonga uyu kana uri kutarisira kuva nemwana asi unogona kuzvikurukura nachiremba wako. Lupron mushonga unobayiwa jekiseni unofanirwa kujowa mumhasuru mwedzi yega yega ye1-6. Gara uchiita shuwa kuti iwe unotora muyero kubva kuna chiremba wako, asi iwe unogona zvakare kudzidziswa maitiro ekuzvibaya wega kuti ive nyore muyero wekutungamira mukunyaradza kweimba yako.
Leuprolide acetate kutenga inowanikwa nyore mune ese epamhepo uye epanyama ma pharmacy. Iyo leuprolide acetate mutengo dzimwe nguva inogona kusiyana zvichienderana nekwaunotenga. Nekudaro, zvinogara zvichikurudzirwa kuti utore mushonga chaiwo kubva kuna chiremba. Rangarira kuwedzeredza kana kushandisa zvisizvo leuprorelin acetate kunogona kutungamira kune zvakakomba mhedzisiro, uye iwe unofanirwa kudzivirira kuitora usati waenda kunovhenekwa kwachiremba. Gomarara chirwere chakakomba, uye haufanire kuisa panjodzi yekutora mishonga yayo zvisina kurongeka. Taura nachiremba wako kuti uwane rumwe ruzivo nezve leuprorelin acetate poda dosage.
Leuprolide acetate poda ndeye potent gonadotropin-kusunungura hori receptor (GnRHR) agonist, uye yakaratidza kuve yakakosha muzvirwere zvakasiyana zvekiriniki. Semuenzaniso, pakurapa kwe "uterine fibroids", kenza yeprostate, chirwere chepakati chekusununguka (mamiriro anoita kuti vana vasvike pakuyaruka kupfuura zvanga zvichitarisirwa), uye endometriosis. Mune aya ese hutano mamiriro, leuprolide inogona kushandiswa yega kana nemamwe madhiragi. Ichi chinodhaka chinogona zvakare kushandiswa pamwe chete nemamwe mishonga kurapa anemia, iyo inokonzerwa kubva muchibereko fibroids.
The leuprorelin acetate dosage inofanira kujekeswa mumuviri wako kuburikidza nemhasuru. Shandisa iyo U-100 insulin sirinji kupa yako dosi uye zvakare uve nechokwadi chekuti unoshandisa majekiseni anopiwa nemugadziri. Kana iwe uchifanira kushandisa sirinji yakasiyana, saka shandisa chete 0.5-mL inoraswa. Rangarira kuti iyo leuprorelin acetate poda inofanira kusanganiswa sezvakatsanangurwa nemugadziri usati washandisa. Kuzunza mhinduro kunogona kusakupa iwe nekusanganiswa kwakaringana. Leuprolide kudyidzana kuchakubatsira iwe mukuzadzisa zvaunoda mhedzisiro asi gara uchizviwana kubva kuna chiremba wako.
Leuprorelin acetate sisitimu yekuita zvinoenderana nemamiriro ehutano ari pasi pekurapwa. Semuenzaniso, kana ichishandiswa pakurapa kenza yeprostate, inodzikisa kugadzirwa kwe testosterone, iyo inobatsira kukura nekupararira kwemasero ekenza. Kunyangwe Leuprorelin Acetate poda (74381-53-6) kushandiswa hakurape kenza yeprostate, inobatsira mukuderedza marwadzo uye kukura kwemasero ekenza mumuviri wako. Nekudaro, mushonga uyu unogona kutorwa uri wega, asi varapi vanokurudzira kuti uutore pamwe chete nemimwe mishonga yekenza yeprostate kuti uwane mhedzisiro.
Kunyangwe mushonga uyu usingatenderwe kuti ushandiswe muvakadzi mune dzimwe nyika, zvave kuratidza kuti zvinoshanda mukurapa endometriosis. Pano, mushonga unoshanda nekudzvinyirira kugadzirwa kweestrogen mumuviri wako, iyo inowanzozivikanwa se "estrogen surge." Pano, iyo Leuprorelin acetate mashandiro ekuita anotarisana zvakanyanya mukuderedza iyo estrogen, mahormoni anoitisa nguva dzako. Paunotanga kutora leuprorelin acetate dosage, iwo estrogen mazinga anokwira kwemavhiki mashoma ekutanga, mushure meizvozvo madanho eestrogen achadzika. Maitiro aya anogona kumbomisa nguva yako, uye semhedzisiro, iyo endometriosis zviratidzo zvinodzikiswa.
Leuprorelin acetate kenza yemazamu, kune rimwe divi, inobatsira pakurwisa chirwere chinouraya mumadzimai. Kunyangwe progesterone uye estrogen isiri iyo kenza yemazamu, vanoita basa rakakosha mukubatsira kwavo kukura uye kupararira. Kugadzirwa kweaya mahormone maviri kunogona kumiswa neyakavhiya nzira yekubvisa mazai kana nzira yekurapa.
Luteinizing hormone inogadzirwa nepituitary gland, inokonzeresa kugadzirwa kweprogesterone uye estrogen nemazai. Iyo leuprorelin acetate inoshandisa inodzvinyirira kugadzirwa kweiyo luteinizing hormone, nokudaro ichideredza estrogen uye progesterone mazinga mumuviri wako. Izvi zvinoreva kuti kukura kwecancer maseru uye kupararira kuchadzora, zvichiita kuti zvive nyore kuti gomarara repazamu ridzorwe.
4. Mashandisiro ekushandisa leuprorelin acetate?
Iyo leuprorelin acetate manejimendi inogona kuitwa munzira mbiri huru kuburikidza nejekiseni yakananga kana hupfu, iyo inowanzo gadziriswazve nesolvent isati yatora muyero. Vanachiremba ndivo vanhu vakanakisa kutakura edu maviri maitiro, asi kana iwe ukadzidziswa, unogona kuzviita zviri nyore kumba.
(1) Leuprorelin acetate jekiseni
Leuprorelin acetate jekiseni mushonga unoshanda kwenguva refu uyo ​​unobayiwa jekiseni musono uye unofanirwa kupihwa nachiremba. Iyo jekiseni inowanzopihwa kamwe chete pamwedzi kana kunyangwe kamwe chete pamwedzi mitatu, mina, kana mitanhatu zvichienderana nemamiriro ako. Kune rimwe divi, leuprorelin acetate jekiseni dzimwe nguva inogona kupihwa sekumira-kwenguva refu kumisa kunowanzozivikanwa se (Eligard) inojowa mumhasuru dzako yega yega 3, 4, 6, kana mwedzi mitanhatu.
Mushure mekuongororwa kwekurapa, chiremba wako anokuraira zvinoenderana nekukuisira yakanakisa peptide poda dosi iwe. Iyo nguva iyo yako dosi kutenderera ichatora zvakare ichagadziriswa nachiremba wako mushure mekuongorora mamiriro ako. Majekiseni acho anowanzosiyana kubva pamurwere kusvika kune mumwe.
(2) Leuprorelin acetate poda kudzokorodza
Dzimwe nguva unogona kufunga kushandisa iyo leuprorelin poda, inova zvakare ine simba fomu yechirwere ichi chine simba chinobatsira mukurwisa mamiriro akasiyana ehutano, sezvambotaurwa. Nekudaro, iyo Leuprorelin acetate poda inofanira kuve yakagadzirirwa zvakanaka kana kugadziriswazve isati yajowa mumhasuru dzako. Iyo poda inoda kuongororwa uye haufanire kushandisa sirinji yakasviba. Paunenge uchigadzirira iyo leuprorelin acetate, shandisa iyo diluent inopihwa nemugadziri wemishonga. Screw iyo chena plunger mune yekumira kusvikira yatanga kutendeuka, ita shuwa kuti wakabata sirinji yakatwasuka. Iye zvino sununura rinodzora nekusundira plunger zvishoma nezvishoma kwemaminitsi masere kusvika chigubhu chekutanga chasvika pamutsetse webhuruu pakati pemba. Yese nguva iyi chengeta sirinji yakatwasuka.
Zvishoma nezvishoma sanganisa hupfu kuti uve nechokwadi chekuti inouka yunifomu yemamky kumiswa. Muchiitiko chekuti hupfu husina kunyangarika zvizere mukugadziriswa, peta iyo syringe kusvikira zvese zvinyoro zvanyungudika. Usatore dosage kana iyo Leuprorelin Acetate poda (74381-53-6) haina kuenda mukumiswa zvachose. Mushure mekuvakazve, tora yako dosi nekukurumidza kubva pakamiswa kwacho mukati menguva pfupi kwazvo. Zvakare, usatore chero kumiswa kusati kwashandiswa mukati maawa maviri mushure mekuvakazve nekuti haina mishonga yekuchengetedza uye inogona kukuvadza hutano hwako.
Leuprorelin acetate manejimendi ingori jekiseni, uye iwe unofanirwa kugara uchiwana dosi kubva kuna chiremba wezvekurapa kuti uwane mhedzisiro. Kunyangwe iwe uchifungidzira iwe uine chirwere chinogona kurapwa neiyi peptide poda, usambofa wakatenga uye kutanga kuitora usina kuenda kunovhenekwa kwachiremba. Leuprolide acetate vagadziri inogona kuratidza mushonga wemushonga pamirayiridzo yekushandisa, asi izvo zvingasashanda iwe.
Miviri yevanhu yakasiyana, uye mamwe madhivhisi anogona kunge akanyanya kukwirira kukufumura iwe kune akasiyana leuprolide acetate mhedzisiro kana yakanyanya kuderera kutadza kuunza zvido zvaunoda. Leuprolide acetate dosages inosiyana kubva kune mumwe munhu kuenda kune mumwe, uye ivo zvakare vakatsanangurwa nemamiriro ari kurapwa pamwe nezera remushandisi. Leuprolide acetate mushonga unofanirwa kutorwa uchitungamirwa nachiremba sezvo uchigona kuva nenjodzi kana uchishandiswa zvisakafanira kana kunyanyisa. Heano mamwe eakasiyana leuprolide acetate dosages yemamiriro akasiyana ehutano;
Adult leuprorelin acetate dosage yeProstate cancer
Pano pane akasiyana dosages inogona kuve inovhiringidza, asi chiremba wako achakusarudzira iyo yakakodzera iwe. Madhiri acho anotevera;
1mg jekiseni kamwe pazuva
5mg intramuscular jekiseni rinofanira kutorwa kamwe chete pamwedzi.
Iwe unogona zvakare kuenda kune 22.5 mg iyo iwe yaunotora kamwe mumwedzi mitatu yega yega.
Iko zvakare kune 30mg jekiseni jekiseni inotorwa kamwe mumwedzi mina.
45mg intramuscular jekiseni raunotora kamwe mumwedzi yega yega.
Iwe unogona zvakare kusarudza kuenda kune iyo 65mg subcutaneous implant inova inochinja-chinja sezvo iwe uchazongotora chete mushonga kamwe chete pamwedzi ye12 kana gore.
Adult leuprorelin acetate piritsi yea Endometriosis
Iyo yakakurudzirwa muyero wevarwere ve endometriosis ndeye 3.75mg, iyo inofanirwa kujowa kamwe pamwedzi kweinenge mwedzi mitanhatu. Kune zvekare imwe sarudzo apo chiremba wako anogona kupa 11.25mg, iyo yauchabayiwa jekiseni kamwe chete pamwedzi mitatu. Vakadzi vanotora leuprorelin kune endometriosis vanofanirwa zvakare kufunga nezvekuenda kunotsiva mahormone kurapwa, inova yakanakira kudzora zviratidzo zvevasomotor uye kurasikirwa kwemaminetsi emapfupa. Nekudaro, kuyera bhenefiti yega yega yekurapa kunofanirwa kupihwa pekutanga pakusarudza nzira yekurapa chaiyo.
Pediatric leuprorelin acetate piritsi yeanogona Kukura
Kuyaruka kwehunhu hunhu apo vana vanokudziridza hunhu hwevakuru pakutanga pane zvinotarisirwa. Kana kuyaruka kuchatanga isati yasvika nguva ye8 yevasikana uye 9 muvakomana, inoonekwa seyakanaka. Mamiriro acho anogona kudzorwa nekutora leuprorelin acetate dosage. Nekudaro, uremu hwemwana hwunotemura mwero wakakodzera wekurapa chirwere ichi. Kuputsa kwedhiza iri seanotevera;
Kurera muviri wakaderera pane 25kg iyo inokurudzirwa piritsi ndeye 7.5mg jekiseni kamwe pamwedzi
Mwana anorema 25 kusvika ku37.5 kg anofanirwa kutora dosi ye11.25 kamwe pamwedzi.
Kune vana vari pamusoro 37.5kg, iyo yakakurudzirwa piritsi ndeye 15mg jekiseni kamwe pamwedzi.
Paunenge uchitora yako Leuprolide poda dosi, mahormone anofanirawo kuongororwa mushure memwedzi ye1 kana 2 yese kuve nechokwadi chekuti pane yakakwana pituitary gonadotropin. Kugara uchiongororwa zvekurapa kuchabatsira chiremba wako kuti aongorore kufambira mberi kwekurapa pamwe nekutora chero chiitiko chinogona kuitika panguva yekurapa.
Rangarira, chiremba wako ndiye munhu chaiye wekuseta Leuprorelin dosage yevakuru nevana mushure mekuongorora mamiriro ehutano. Dzimwe nguva unogona kurairwa kuti utange nemadosi mashoma, ayo anogona kugadziridzwa nenguva mushure mekucherechedza kupindura kwemuviri wako. Leuprolide acetate uye nhumbu hazvitenderwe sezvo mushonga unogona kukuvadza mwana asati azvarwa. Vakadzi vanorayirwa kuti vasatore iyi peputidhi hupfu pavanenge vakatarisira kana pavanenge vachironga kubata pamuviri chero nguva munguva pfupi.
6. Leuprorelin acetate parutivi mhedzisiro
Muzviitiko zvakawanda, kana iwe ukashandisa zvisizvo kana kuwedzeredza chero mushonga, zvinokufumura kune zvakakomba mhedzisiro; zvisinei, simba remuviri wako dzimwe nguva rinogona kuona kukura kwemhedzisiro. Izvi zvinoitika kana iwe ukasateedzera kuraira kwedosi uchitora leuprorelin acetate. Leuprolide yambiro inogona kusiyana zvichienderana nezvinhu zvakasiyana, senge huremu hwemuviri uye kushivirira kwemuviri. Vamwe vashandisi vanowana mhedzisiro kunyangwe pavanotora leuprolide yekudyidzana yakaderera madosi apo vamwe vanogona kutora yakakwira madosi uye vachiri kunakidzwa nezvakanaka.
Pane zvakajairika leuprorelin acetate mhedzisiro izvo zvinogona kuitika neanenge wese mushandisi, asi ivo vanonyangarika nenguva. Yakakwirira mhedzisiro mhedzisiro ine ngozi, uye kana iwe uchinge waangovaona, unofanirwa kuzivisa chiremba wako nekukurumidza. Kune rimwe divi, kune zvekare zvisingawanzo mhedzisiro mimwe iwe yausingawanzo kuwana paunenge uchitora leuprorelin poda. Aya mhedzisiro akadai anotevera;
(1) Zvakajairika leuprorelin acetate mhedzisiro
Marwadzo akakomberedza nzvimbo yejekiseni
(2) Yakanyanya leuprorelin acetate side athari
Kana iwe ukasangana nezvinotevera zvinokanganisa tarisiro yekurapa nekukurumidza sezvaunogona;
Kusaita kana kufema nekukurumidza
Kuverengera kana kudhonzera kwetsoka dzako kana maoko
(3) Rare leuprorelin acetate side athari
Kune zvekare infrequent mhedzisiro inobatanidzwa nemushonga uyu. Nekudaro, iwo akanyanya apo anoitika. Saka, iwe unofanirwa kuzivisa chiremba wako nekukurumidza zvisati zvanyanya. Dzimwe nguva dzinoitika nekuda kwekunyanyisa, kana allergy uye zvinosanganisira;
Kunyanyisa kubuda kweropa kwevakadzi vashandisi.
Leuprolide acetate uye chirwere cheshuga zvakare rimwe risingawanzo mhedzisiro mungave iwe. Mushonga uyu unonzi unowedzera mikana yekunetseka nechirwere cheshuga.
Kudzika kwenzwi muvakadzi
Mukupedzisa, leuprorelin acetate yakaratidza kuve mushonga mukuru kana ukashandiswa mushe munyika yekurapa. Panguva imwecheteyo, leuprolide acetate buy inowanikwa kune yako pharmacy iri padyo, uye iwe unogona zvakare kugadzira odha yako pazvitoro zvakasiyana zvepamhepo. Kune akawanda leuprolide acetate vagadziri uye vanopa pamusika nhasi, asi gara uine chokwadi chekuti unoita yako research kuti uwane chigadzirwa chemhando pamutengo unonzwisisika. Iyo leuprorelin acetate mutengo inosiyana kubva kumutengesi mumwe, ndosaka uchifanira kuita tsvakiridzo chaiyo usati watenga mushonga. Nekudaro, usatore leuprorelin acetate kenza yemazamu usati wawana iwo muyero wakakodzera kubva kuna chiremba wako.
Rwiyo, G., Gao, H., & Yuan, Z. (2013). Mhedzisiro ye leuprolide acetate pane ovarian basa mushure me cyclophosphamide-doxorubicin-based chemotherapy mune premenopausal varwere vane kenza yemazamu. Kurapa oncology, 30(3), 667.
Köhler, G., Faustmann, TA, Gerlinger, C., Seitz, C., & Mueck, AO (2010). Chidziro - chakasiyana kudzidza kuti uone kushanda pamwe nekuchengetedzwa kwe1, 2, uye 4 mg ye dienogest zuva nezuva kune endometriosis. International Zvinyorwa zveGynecology & Obstetrics, 108(1), 21-25.
Tunn, UW, Gruca, D., & Bacher, P. (2013). Mwedzi mitanhatu leuprorelin acetate depot mafomati mune epamberi gomarara reprostate: kuongororwa kwekiriniki. Kupindira kwekiriniki mukukwegura, 8, 457.
Johnson, SR, Nolan, RC, Grant, MT, Mutengo, GJ, Siafarikas, A., Bint, L., & Choong, CS (2012). Sterile abscess kuumbwa inosanganisirwa nedepot leuprorelin acetate kurapwa kwepakati pekutanga kuyaruka. Chinyorwa chevashandi vehutano uye hutano hwevana, 48(3), E136-E139.